Ganacsiga Bulshada, Kacaankii Deggan | Martech Zone
Ganacsiga Bulshada, Kacaanka Degan
Isniin, Maarso 19, 2012 Talaado, Maarso 20, 2012 Marty Thompson
Warbaahinta bulshada iyo teknoolojiyadaha bulshada ayaa hadda qayb muhiim ah ka ah sida shirkadaha u ganacsadaan. Waxay noqotay mid gabi ahaanba isku dhafan oo isku dhafan dadaalkeena suuq geynta. Suuqleyda dijital ah kama hadli karaan waxyaabaha ku saabsan, SEO, degsiimaynta bogga, PR. Macaamiisha, ha ogaadeen ama ha ogaadeen, hadda waxay leeyihiin kaalin gebi ahaanba cusub oo ay ku leeyihiin gudaha goobta shirkadaha. Waxay ka ciyaaraan kaalin aasaasi ahaan ka duwan xeelado badan oo xeeladeeyayaal ah marna laga ilaaliyo derbiga aamusnaanta.
Annagu suuq ahaan ma awoodi karno inaan ka fikirnoahaansho bulsho”Sidii wax ka soocan hawlaheenna kale.
Xaqiiqadan bulsho ayaa hada u gudbeysa waji kale. Ururradu hadda waxay diiradda saarayaan dadaalkooda sidii ay ugu horumarin lahaayeen gudaha, iyagoo ka faa'iideysanaya faa'iidooyinka firfircoonaan cusub ee iskaashiga bulshada.
Sida horumarka laga sameeyay ERP, CRM, otomaatiga suuq geynta, iyo meelaha kale, ganacsiga bulshada waa kacaan kale oo xasilloon, oo si tartiib tartiib ah mararka qaarkood u dhaca, si dhaqso leh kuwa kale.
Doodda ku saabsan waxa loola jeedo ganacsiga bulshada, iyo qiimaha “ay” siineyso, haddii ay jiraan, ayaa ka careysan wareegyada qaarkood. Laakiin feker ahaanteyda, waxay u taagan tahay kacaan kale oo xasilloon. Kama soo kicin hal maalin oo waxaan helnay IBM, SAP, Oracle, Salesforce, iyo kuwa kale, isla markiiba waa la dhisay, diyaarna waa la geeyay. Kaliya weydii ciyaartoydan shirkadaha, waxayna kuu sheegi doonaan sheekooyin aad u xiiso badan oo ku saabsan sababta bulshada ay u tahay waxa ugu weyn ee soo socda. Waxay qaadanayaan iskaashiga bulshada sidii wax qiimo leh. Rajadaydu waxay tahay inaan dhamaanteen u adeegsan karno fursadan si aan u bixin oo kaliya qiimaha dheeraadka ah ee ganacsiga, laakiin sidoo kale inaan bixinno muuqaal cusub oo ah halka lagu xuso farqiga u dhexeeya isdhexgalka aadanaha. Haa, waxaan aaminsanahay awoodda geeks.
Ganacsiyadaas oo marka hore ka faa'iideysan doona dadaalladan waxay qayb ballaaran uga mahadcelin karaan kuwa sida habboon u dhexgalay nashaadaadka bulshada ee adeegga macaamiishooda iyo taageeradooda, suuqgeynta, iyo meelaha kale ee waxqabadka leh. Waxay ka mid yihiin kuwa maalgashi muhiim ah ka sameeyay dhisidda goleyaasha bulshada ee bulshada ku fiican, adeegga iyo kooxaha taageerada, barnaamijyada maareynta aqoonta ee adag, iyo kuwa qaatay fikradda bulshada CRM, oo dhab ahaan lagu dul dhisay. Ganacsiga bulshada ma yahay uun dib-u-habeyn dadaalladaas ah? Waxaan u maleynayaa inay jawaabtu tahay maya, laakiin in badan oo ka mid ah wixii la bartay, iyo in badan oo ka mid ah iskaashiga bulshada ee shirkadaha u ekaan doona ayaa lagu abaal marin doonaa dadaallada noocaas ah.
Marka, ka warran ganacsigaaga? Miyaad si buuxda u ogaaneysaa faa'iidooyinka istiraatiijiyad suuq-geyn isku-dhafan oo ay ku jiraan qaybaha bulshada ee caqliga leh? Maxay yihiin fikradahaaga ku saabsan waxa loola jeedo ganacsi bulsho?
Tags: Waxqabadka BulshadaDK New MediaMarty ThompsonGanacsiga Bulshadawarbaahinta bulshada
Waxaan ahay istiraatiijiyad ganacsi bulsho dhanka Suuq geynta Laba Moos. Eeda dusha ka saara waalidkey, barbaarinteyda wadnaheyga, ama ku mashquulitaankeygii hore, laakiin dadyowgu waxay ii sheegaan runti, runti wan ku fiicanahay dhismaha xiriirka iyo gorgortanka, xiritaanka farqiga u dhexeeya waxa ay macaamiishu filayaan, iyo waxa shirkadaha waawayn ay ahaanayaan (laakiin badanaa ma ahan)
Raadi Xiriirinta Soo-galista si fudud Blekko
Taariikhda Isbedelada Google algorithm
Mar 23, 2012 at 9: 55 PM
Waxaan u maleynayaa inaan heysano sanado badan si aan ugu hagaajino heerarkeena kaladuwan ee ganacsiga bulshada. Weli waxaan ku horumarineynaa waaxaha gudaha iyada oo loo marayo habka xariiqda wax soo saarka marka xaqiiqadu tahay in dhammaan waaxaha ay saameyn ku yeeshaan sumadda saamaynta ay ku leedahay baraha bulshada - laga bilaabo hoggaanka, bulshada, suuqgeynta employee shaqaale kasta door buu ciyaara. Nasiib darrose, taasi maahan sida geedaheenna tamarta loo qaabeeyey, in kastoo. Waxaan sii wadaynaa in nalaka sifeeyo macluumaadka aan u baahanahay… oo aan rabno!
Gaaritaanka meeshaas ayaa noqon doonta mid xiiso leh, in kastoo!